Dhiirrigelinta furaha tacaburka ee furitaanka xadka Mareykanka iyo Kanada
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Safarka Dalxiiska » Dhiirrigelinta furaha tacaburka ee furitaanka xadka Mareykanka iyo Kanada
Safarka Dalxiiska • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Wararka Kanada • Wararka Dowladda • Caafimaadka Warka • Warshadaha Warshadaha • Hoteelada & Dalxiisyada • News • Dib-u-dhiska • Waajib ah • Sports • Dalxiiska • Gaadiidka • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda • Wararka Mareykanka • Wararka kala duwan
Kanada waxay haysaa waayo -aragnimo dalxiis oo hodan ah oo daboolaysa dhul -beereedka kala duwan ee dabiiciga ah iyo magaalooyinka.
Dalxiisayaasha Mareykanka waxaa loo yaqaan qaar ka mid ah kuwa ugu firfircoon adduunka oo dhan.
Sannadka 2020, welwelka ku saabsan jirdhiska jirka iyo caafimaadka ayaa ku kordhay Mareykanka.
Dalxiiska dalxiiska waxaa loo qaybin karaa waaya -aragnimo 'jilicsan' ama 'adag' taas oo ku xidhan heerka halista ku lug leh hawl kasta.
The Dawlada Kanada ayaa dhawaan ku dhawaaqday in xuduudaheeda dib loogu furi doono dalxiisayaasha Mareykanka laga bilaabo 9ka Ogosto 2021. Xuduudaha Kanada ayaa xirnaa tan iyo Maarso 2020; sidaa darteed, talaabadani waxay astaan ​​u tahay dib -u -soo -kabashada dalxiiska ee meeshii loo socday iyo hal dariiqo oo Kanada dib ugu soo ceshan karto kharashkii Maraykanka ee lumay sannadka 2020 waa iyada oo la dhiirrigelinayo waaya -aragnimada xiisaha leh.
Maraykanku waa suuqa ilaha koowaad ee Canada. Cudurka ka hor, Kanada waxay heshay 15.1 milyan oo dalxiisayaal Mareykan ah sanadka 2019, taas oo ka dhigan 68% wadarta guud ee imaanshaha caalamiga ah. Sanadkii la soo dhaafay ayaa la arkay dadka ka yimid Mareykanka oo hoos u dhacay 86.1% sanadka (YoY), taasoo muujineysa muhiimada dib u furitaanka xadka.
Dalxiisayaasha Mareykanka waxaa loo yaqaan qaar ka mid ah kuwa ugu firfircoon adduunka oo dhan. Adventure/sport wuxuu ahaa nooca saddexaad ee ugu caansan fasaxa jawaabeyaasha Mareykanka sahan warshadeed dhowaan. Tani waxay muujineysaa in safarka noocaan ah uu caan ku ahaa dalxiisayaasha Mareykanka ka hor masiibada COVID-19.
Sanadka 2020, walaacyada la xiriira jir dhiska iyo caafimaadka ayaa ku kordhay Mareykanka. Sahankii ugu dambeeyay ayaa lagu ogaaday in 55% jawaabeyaasha Mareykanka ay 'aad u' ama 'aad uga welwelsan yihiin caafimaadka shaqsiyeed. Sababtoo ah dabeecadda faafitaanka COVID-19 ee ka dhex jira shaqsiyaadka aan firfircoonayn, waxay u badan tahay inay kordhisay walaacyada la xiriira caafimaadka guud, kuna dhiirrigeliya macaamiisha Mareykanka inay noqdaan kuwo firfircoon.
Dalxiiska dalxiiska waxaa loo qaybin karaa waaya -aragnimo 'jilicsan' ama 'adag' taas oo ku xidhan heerka halista ku lug leh hawl kasta. Dhaqdhaqaaqyada jilicsan waxaa ku jiri kara waaya -aragnimo sida socodka, daawashada shimbirta iyo kalluumeysiga. Dhinaca kale, waxqabadyada adag waxaa ka mid noqon kara barafka, rafting -ka biyaha cad iyo boodada bungee. Markay sii weynaadaan suuqa bartilmaameedka, waxqabadyada khatarta ku salaysan ee yar waxay badiyaa rabaan. Sidaa darteed, tani waxay muujineysaa in dalxiiska dalxiiska uu rafcaan ka qaadan karo dhammaan kooxaha da 'kasta.